Soo saaraha Crane-ka ugu Fiican iyo Warshada |Huaruide
Sidee buu u shaqeeyaa Huaruide Stacker Crane?
Huaruide stacker crane ku salaysan rar midaysan ASRS, waxa uu leeyahay hal ama in ka badan oo dariiqyo cidhiidhi ah oo ah qaab dhismeedka kaydinta kaydinta ee dhismaha jira ama bakhaar xidhan.Dhismuhu wuxuu gaari karaa ilaa 40 mitir.Mashiinka kaydinta iyo soo-celinta (SRM) waxay u dhaxaysaa xayndaabyada labada dhidibka X, iyo dhidibka Y, oo ay baray WMS kaas oo si degdeg ah u heli kara sagxadaha loo qoondeeyey iyo culaysyada kale ee culus ee sugan, cufnaanta sare iyo nidaamka kaydinta hufan. .Caadiyan, nidaamku wuxuu ka kooban yahay hal SRM dariiqiiba.Laakin haddii ay dhacdo in uu yahay nidaam tartiib tartiib ah, hal SRM waxaa loo qoondeyn karaa 2 ama dhowr marin.
Sidee Huaruide Stacker Crane uga dhigaysa saadka mid fudud?
Marka la barbar dhigo bakhaarka qadiimiga ah ee gacanta, Huaruide stacker xallinta wiishka wuxuu gaari karaa palettes badan iyadoo la dheereynayo dhererka bakhaarka leh aag xaddidan.Saadka ayaa si degdeg ah u socon doona iyadoo la dejinayo xawaaraha wiishka, mashiinkuna uma baahna nasasho.
Qaar ka mid ah bay'ada aadka u daran, tusaale ahaan -30 ℃ bakhaarka kaydinta qabow, isticmaalka wiishka stacker waxay badbaadin kartaa tamarta wakhti yar oo furitaanka albaabka kulaylka u adkaysta, waxayna buuxin kartaa dadka aan shaqaynaynin gudaha, sidaas darteed waa xal badbaado leh hawlwadeenka.
Laga soo bilaabo daawashada muddada dheer, isticmaalka wiishka stacker waa in ay lacag ku badbaadiso shaqaale yar, laakiin aad u hufan.Sidoo kale, nidaamka waxaa gacanta ku haya Nidaamka Maareynta Warehouse (WMS), kaas oo siinaya 100% muuqaal iyo saxsanaan, kana fogaato lumitaanka khaladaadka hawlwadeenka.WMS waxay la socon kartaa goobaha alaabada waxayna hagtaa dhaqdhaqaaqa rarka iyadoo si buuxda ula midaysa aaladaha software ee caqliga leh.
• Qaab dhismeed is haysta oo leh xoog sare iyo qallafsanaan wanaagsan.
Matoorka iyo qaybaha korantada ee dibadda laga keeno, la isku halayn karo oo deggan.
• Hawl fudud HMI, qaab-dhismeedka modular, isgaarsiinta network, si toos ah oo tayo sare leh.
• Difaaca dhicista, ilaalinta xawaaraha dheeraadka ah, iyo ilaalinta joojinta, ka ilaali dhammaan dhinacyada.
• Xidhiidh la'aanta xadiidka hagaha dhulka, xadiidka qaabka "T" u go'ay ee wiishka sida tareemada wiishashka, nadiifinta lebbiska, xoog sare iyo toosnaan, xasilooni wanaagsan iyo buuq hoose.
• Tignoolajiyada fargeetada hormuudka ka ah ee caalamiga ah, una shaqeysa si hufan oo deggan.
Hababka ka hortagga lulidda fiilada, muuqaalka qurxoon, ka hortagga dabaysha iyo badbaadada.
Habka kontoroolka dareemayaasha korantada ee ku dhex jira ayaa ka dhigaya hawlgalka mid badbaado leh.
• 100,000 jeer oo tijaabo nolosha ah ayaa la sameeyay si loo helo dammaanad dheeri ah marka la shaqaynayo.
• Waa la isku halayn karo maadaama ay soo saartay Huaruide si toos ah xarunta mashiinka CNC.
• Komishinka, gaadiidka iyo rakibaadda kharash-ku-ool ah
• Yaraynta agabka agabka agabka iyadoo ay ugu wacan tahay fikradda qaybaha gaarka ah ee la wadaago
• Masts ayaa la isugu keenay qaybo u dhexeeya ilaa 12m si toos ah goobta
• Automation ee gelitaanka iyo ka bixista alaabta.
Waxay xakameysaa oo cusbooneysiisaa agabka.
• Waxay tirtirtaa khaladaadka maaraynta gacanta.
Nidaamyadan waxaa la waafajin karaa xaaladaha shaqada ee gaarka ah sida heerkulka qaboojinta -30 °C, qoyaan badan ama astaamo gaar ah oo ay ku jiraan suurtagalnimada kordhinta xawaaraha shaqada caadiga ah.
• Dhererka ugu badan: 45m
• Culayska ugu badan ee 3 tan
Xawaaraha toosan: ilaa 2m/s
• Range Product: hal iyo laba mastar
Xawaaraha hawlgalka: ilaa 3m/s
• Dhexdhexaadinta: 20 - 45 laba wareeg/saacaddii
Hore: Baabuurka lagu Hago Tareenka
Xiga: Kor uqaadida palette